Ịzụlite Ụmụaka na Mkpakọrịta ọnụ | Mgbe ụmụaka nọ n'ebe ahụ
Wepụta oge ma chọpụta onwe gị dị ka di na nwunye ọhụrụ
Nọgide na-enwe ntụrụndụ na ọbụbụenyi!
Ná mmalite ị ka nọ n'ịhụnanya, ihe ọ bụla na-aga dị ka ọ kwesịrị ịdị. Oge ehihie Cinema, nri ụda ọkụ na ụtụtụ Sọnde ị nwere ike ihi ụra. Ya mere ejikọtara ọnụ, ọ dịghị ihe ọ bụla na-anọchi anya usoro atụmatụ ezinụlọ.
Ịzụ ụmụ na mmekọrịta ọnụ
Ma njedebe nke njedebe na-abịa ná njedebe: ọ bụghị n'oge na-adịghị anya mmekọrịta ga-ada ada nanị n'afọ mbụ mgbe a mụsịrị nwa. Ụmụaka na-eti mkpu, esemokwu, ụra ehihie, ihe a nile ga-eme ka nwatakịrị na-eto eto nwekwuo ike karịa ndị na-enyo enyo. Ma onye ọ bụla ekwuola na oge ụmụ ntakịrị bụ otu n'ime ihe mara mma.
Idozi mmekọrịta na ezinụlọ
Onye ọ bụla ga-ebu ụzọ rụọ ọrụ ọhụrụ ya
Nwata bu ibu ibu. Ọ bụghị nanị ihe ego na-eme ka ezinụlọ ndị na-eto eto mekpaa ahụ. Nwatakịrị na-agbanwekwa ọrụ gị na mmekọrịta gị. Na mberede, ị bụghịzi enyi, di ma ọ bụ nwunye, mana nne ma ọ bụ nna, na ị nwekwara ibu ọrụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na nwanyị ahụ nọ n'ụlọ, nwoke ahụ aghaghị ilekọta nwunye ya na nwa ya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-etinye ihe ọmụma a n'ọrụ n'ihi na ebe ọrụ anaghị egosipụta onwe ya taa dị ka ọ dịbu. Nwanyị a, n'aka nke ọzọ, ga-ekpebi ma ọ ga-etinye onwe ya kpamkpam n'ilekọta nwa ya ma ọ bụ ịlaghachi ọrụ mgbe oge ole na ole gachara, na itinye nwa ahụ na crèche ruo ogologo oge.
Ọ bụrụ na ọ kpebisiri ike ịnọ ebe ahụ maka ụmụ ya, ọ na-achụrụ otu njirimara nke njirimara na ahụmahụ mbụ ya na ọnọdụ ọhụụ zuru oke. Ihe niile anaghị abụkarị Rosy n'oge a, ọ bụrụgodị na nne na-eto eto nwere obi ụtọ n'ọrụ ya. Ụmụaka ehihie na-ebe ákwá n'ihi colic ma ọ bụ obere ezé mbụ, nsogbu na onye òtù ọlụlụ, ejighị n'aka, ọ bụrụ na ị na-eme ihe niile ziri ezi, na mgbanwe hormone na-enyekwa ala ugboro ugboro.
Enweghị afọ ojuju nna
Ndụ kwa ụbọchị nke nna ọhụrụ ahụ adịghị agbanwe dịka nke nne. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ lọta n'ụlọ, ọ dịkarịghị kelere ya nke ọma "Ndee obi ụtọ, lee ka ụbọchị gị si bụrụ!", Ma eleghị anya ọ ga - esi na nwunye ya iwe iwe kachasị mma, n'enweghị ikwu ya, mkpụrụ ahụ na - ejide aka ya.
N'ikpeazụ, n'anya ya, nwanyị ahụ buru ụzọ hụ banyere ya yiri ka ọ gbanwere kpamkpam. Ọtụtụ mgbe, ọbụna ụmụ mmadụ na-eji ịnụ ọkụ n'obi emeso ụmụaka ahụ ihe. Nwatakịrị a ga - abịa n'ihu - ya mere ọ ga - abụ ruo mgbe ụmụaka ga - agbapụ.
Na mbụ, ndị nna na-eto eto ga-eji ya mee ihe. N'ebe a, ọ na-ewe ọtụtụ ntachi obi, obi ike na ezi njedebe, ka alụmdi na nwunye ghara ịda. Di na nwunye ole na ole nwere ụmụ na-ehi ụra mgbe izu atọ gasịrị!
Mgbe oge na-aga, onye na-ahụkarị ọrụ ya ma nakwere na dị ka di na nwunye, otu ga-ekwupụtakwa onwe ya. Ya mere, nne na nna nile na-eto eto kwesiri ilezi onwe ha anya - ma ha site na mmalite - otu. N'ezie enwere nne na nna ochie na-ewere ọrụ nke onye na-elekọta ụmụaka otu ugboro n'ọnwa, karịa ọbụna ugboro abụọ. Ọ bụrụ na ndị a anaghị ebi na saịtị, ịnwere ike ịnụrụ na ndị enyi gị. O doro anya na onye maara onye na-elekọta ụlọ nwere ntụkwasị obi nke na-adịghị ọnụ.
Ma ọ bụ ezinụlọ ndị na-eto eto na-akwado ibe ha. Eleghi anya onye si agbata obi na-enyekwa ya ilekọta nwa ahụ. Were enyemaka ọ bụla ebe a! Mmekọrịta ahụ na-erite uru na oge a na ogologo oge.
Na mmekorita, onye ọ bụla kwesịrị inwe oge maka ihe omume ntụrụndụ ha, n'agbanyeghị ụmụ ha. N'ebe a, ndị mmekọ ga-agbakọta ọnụ, n'ihi na mgbe ị na-achụso ntụrụndụ gị, ahụ na-ebelata nchekasị ma nwee ike ịgbanye batrị gị. Otu ihe a na-emetụta gburugburu ndị enyi. Ọtụtụ mgbe enyi ndị na-adịte aka na-ata ahụhụ site na oge nne na nna, karịsịa ma ọ bụrụ na ndị enyi ha enwebeghị ụmụ ma ghara ịghọta ma ọ bụrụ na ike gwụrụ mmadụ n'anyasị iji kwurịta okwu ogologo oge.
Ụmụaka na mmekọrịta
N'ebe a: Tọọ oge edozi. A: "Anyị nwere ike izute ọzọ" na-enyere onye ọ bụla. Karịsịa ọmụmụ ihe na ndị enyi na ịzụlite ihe omume ntụrụndụ na-adịkarị mkpụmkpụ, ebe a ị ga-ahụ otu azụ na njirimara ya. Ihe omuma nke ulo na-eto eto bu otua, na mgbakwunye na ndu ubochi nile, nke oma nwere kwa oge echefughi iji nye agwaetiti iji meputa batrị ebe a.
Alụmdi na nwunye na-enye ndụmọdụ
Ọ bụrụ na ihe a niile anaghị enye aka ma ọ bụ na ezughị oge fọdụrụnụ, ọ pụkwara inwe uche iji nweta enyemaka site na ọkachamara. Ndị ọkà mmụta sayensị na-enyekarị ndụmọdụ gbasara alụmdi na nwunye na-ekpughe ngwa ngwa, nsogbu ahụ kpatara. N'ezie, ndị di na nwunye ga-arụ ọrụ ahụ n'onwe ha ma ọ bụrụ na mmekọrịta ha bara uru, ha ekwesịghị izochi ma wepụ ihe ndị na-emetụta ndụ kwa ụbọchị. N'ihi na, n'ezie, ọ bụghị mkpụrụ ka ụta maka nsogbu ndị ahụ, ma ikike ndị nne na nna na-edozi nsogbu ahụ.
Mgbakwunye nchegbu | mmekorita
Ezumike izu ụka | Mkpakọrịta ịhụnanya
Mmekọrịta nwoke na nwanyị; Na-apụta mmekorita
Bụrụ nne ma ọ bụ nna - nọgide na-ahụ di na nwunye hụrụ n'anya | mmekorita